नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन १७, २०७७, १५:३९
काठमाडौं- बालाजु बाइपास क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारको विरोध गर्ने अभियन्तालाई गरिएको गिरफ्तारको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। बृहत् नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाबासी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा नेवाः देय् दबूको संयोजनमा विभिन्न खलःपुचः/मोर्चा/अभियानका तर्फबाट सोमबार बिहान प्रदर्शन गरिएको हो।
केही समययता बालाजु क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारले कैयौंलाई विस्थापित गरेको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। त्यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेट समेत छुट्याएको छ। तर, अदालतले काम रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएपछि पनि सडक विस्तारको काम नरोकिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। उनीहरुले जस्ताको बार समेत भत्काइदिएका थिए। सोही क्रममा प्रहरीले ६ जनालाई गिरफ्तार गरेरको थियो।
गिरफ्तारीमा परेका मीन शाही, महेश्वर मानन्धर, संजय तामाङ, दिपेन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, रुक्षित श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका नागरिक अभियन्ता सुमन साय्‌मी र विरोचन श्रेष्ठलाई समेत प्रहरीले थुनेको थियो। उनीहरुलाई नेपाल भाषा बोल्न प्रहरीले अवरोध गरेपछि उत्पन्न विवाद भएपछि पक्राउ गरिएको थियो।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले आफ्नो भाषामा बोल्न नदिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 'म सम्पूर्ण राज्य पक्षलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु- आफ्नो समुदायमा, आफ्नो दाजुभाइसँग, आमाबाबुसँग मेरो मातृभाषामा कुरा गर्न नपाइने हो? उनीहरुहरुसँग अंग्रेजी, हिन्दी वा चाइनिज भाषामा कुरा गर्ने हो?', उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष महेश कारंजितले प्रश्न गरे।
उनले आफ्नो भाषा बोल्न नदिने कदम आफूहरुको मातृभाषामाथि ठाडो प्रहार भएको बताए।
विकासको नाममा मानव बस्ती उठाउने कदमको पनि वक्ताहरुले विरोध गरेका थिए। 'विकासलाई ठूलाठूला चिल्ला सडकहरु र बहुतले घरहरु मात्रै विकास हो भनिरहनुभएको छ भने विकासको परिभाषा अब बदल्नुस्। विकासलाई हेर्ने आँखा बदल्नुस्। विकास भनेको संस्कृतिको विकास हो। मानवताको विकास हो। मौलिकताको विकास हो। मौलिकतालाई मासेर, मानव बस्तीलाई उजाड बनाएर विकास गर्छौं भनेर भनिएको छ। त्यो विकासको नाममा भइरहेको प्रतिगमन हो', अभियन्ता नरेश ताम्राकारले भने।
त्यस्तै दोभान राईले अहिले विकासको नाममा आदिबासी र जनजातिको मर्मलाई मात्रै नभई विकासकै मर्म र अवधारणालाई नै अन्याय गर्ने काम भइरहेको बताइन्।
'अहिले हाम्रो लडाइँ भनेको विकासको पक्ष र विपक्षको लडाइँ नै होइन। यो लडाइँ मानवता र कुरुपता बीचको लडाइँ हो। न्याय र अन्याय बीचको लडाइँ हो। जीवन र विनाश बीचको लडाइँ हो', राईले भनिन्, 'सिमेन्ट, रोडा, गिट्टी थुपेरेर विकास हुन्छ? सडकको चौडाइ, बिल्डिङको उचाइ, साधनको थुप्राइले मापन गर्छ? विकास भनेको त स्वास्थ्य, सबलता, रचनात्मकता, दीगोपन, कमन सेन्स, वैज्ञानिकता, सहअस्तित्व, मानवता हो।'
उनले अहिले सिमेन्ट र डोजलाई माध्यम बनाएर ध्वंसको तमाशा चलिरहेको बताइन्।
प्रदर्शनकारीले पक्राउ परेका अभियन्ताहरू रिहा गर, हाम्रो घर फिर्ता गर, आदिवासी विस्थापन मुर्दावाद, हाम्रो भाषाको सम्मान गर, बालाजुका ३९ घरलाई पुन:स्थापित गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, कानुनी राज्य प्रत्याभूति गर, अदालतको आदेश पालना गर, सुमन साय्‌मी लगायत अभियन्ताहरूलाई तत्काल रिहा गर, बालाजु बाइपासमा उठिबास गरिएका स्वासीहरूलाई सोही स्थानमा पुन:स्थापित गर, गैर-न्यायिक सडक विस्तार मुर्दावाद जस्ता नारा लगाएका थिए।